अचम्मको जोडी - मह संग दूध
जन्म देखि, मान्छे दूध को स्वाद थाहा हुनेछ, र पछि मह भेटे। पुरातन समयका देखि, मान्छे यी दुई जादुई घटक को मिश्रण (मह संग दूध) शरीर स्वास्थ्य दिन सक्षम छ भनेर बुझे छन्। जो हामीलाई बलियो, बलियो र सुन्दर बनाउने, rejuvenates यो Elixir।
मह र दूध सर्दी, को घाँटी, श्वसन पर्चा र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर्चा को रोगहरु संग मद्दत गर्छ। दुवै लागूपदार्थ र कस्मेटिक्स नाम मा धेरै साधारण छ "दूध र मह", को संयोजन, बच्चाहरु को स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आमा को सौन्दर्य दिन, र आफ्नो खुट्टा लगभग जो कोहीले मा राखे। धेरै व्यञ्जनहरु दुवै जादुई घटक भाग परम्परागत चिकित्सा प्रदान।
यी अद्भुत उत्पादनहरु के के हुन्?
यो उत्पादन यसको पोषण गुण लागि अद्वितीय छ। आखिर, लगभग सबै कस्मेटिक उत्पादनहरु को मुख्य घटक एक स्वस्थ अवस्थामा हाम्रो छाला समर्थन गर्ने तेल र बोसो छन्। यो अर्थमा, दूध बोसो धेरै मूल्यवान उत्पादन असंतृप्त फैटी एसिड, भिटामिन र यसलाई मा निहित लेसितिण धन्यवाद छ। दूध एक ड्रप सय भन्दा बढी एक लाख सूक्ष्म बोसो globules समावेश गर्दछ। यो यस्तो राम्रो तितरबितर (वा ठूलो खण्डीकरणको क्रमलाई) ठीक अवशोषित र epidermis को कक्षहरू द्वारा assimilated अनुमति दिन्छ। दूध शर्करा, प्राकृतिक Pigments र खनिज को एक प्रशस्त मात्रामा धनी छ। यो लगभग सबै इन्जाइमहरु र भिटामिन समावेश गर्दछ। तपाईं सधैं प्राकृतिक दूध संग धुन भने, तपाईं झुर्रियाँ मिलेका छन् देख्ने र छाला दिन द्वारा साना देखिन्छ।
मह मात्र उत्पादन deteriorate गर्दैन छ, र सूक्ष्मजीवहरु wherein सुरु छैन। एक खाद्य उत्पादन वा यसलाई किनभने यसको गुणस्तर (खाना र चिकित्सा) को एक दबाइ छ छैन आपसमा कमसल छन् - यो कसरी मह कोटिबद्ध गर्न भन्न गाह्रो छ।
चाँडै पुरानो बढ्न, कुनै पनि दूध वा मह उपभोग नगर्ने मान्छे, तिनीहरूले सत्तरी को सीमा पार गरेनन्। पचास आधारभूत अत्यावश्यक कार्यहरु पछि बिस्तारै फिका गर्न थाल्छन्।
मह खोकी संग दूध
सर्दी लागि हाम्रो हजुरआमा हामीलाई दूध र मह एक सानो घिउ र सोडा थप्दा, रात को लागि दिन प्रयोग। तर संग बलियो खोकी, को चिकित्सा मदत गर्न सकिएन, जो देखि सुरक्षित यहाँ लोक नुस्खा छ।
दूध एक गिलास जोश;
अब मह र घिउ को नै रकम एक चमचा थप्न;
सोडा पिन्च र राम्रो कुटपिट अण्डाको पहेंलो भाग थप्दा;
सबै राम्ररी मिश्रित।
यस उपकरण मा मदत गर्न सक्छ tracheitis, को उपचार ब्रोंकाइटिस र laryngitis।
मह संग दूध भनेर रक्तअल्पता को उपचार मा मदत उपकरण को भाग हो।
यो गर्न, दूध को एक गिलास लिन र मह एक चमचा मा भंग। त्यहाँ जो मामला मा यो द्वारा साधारण पानी वा रस प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ दूध सहनु सक्ने छैन मान्छे, छन्। एक महिनाको लागि हुनुपर्छ यो उपाय लिनुहोस्। मह किनभने यो थप फलाम र रगत गठन प्रक्रिया को लागि त आवश्यक हो जो मैंगनीज, समावेश गर्छ, जस्तै अनाज रूपमा गाढा प्रजातिहरू, लिन राम्रो छ।
यस्तो फुलेको नसाहरु रूपमा यस्तो व्यापक रोग, को उपचार मा पनि, तपाईं मह एक संकुचन रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
क्यानभास को बाक्लो टुक्रा लिनुहोस् र मह तह धारण;
प्रभावित क्षेत्रमा कपडा राख्दै;
को polyethylene फिल्म र टेप अप माथि अध्यारोपित।
यो आवश्यक छ पहिलो समय मह दुई घण्टा संकुचन प्रभावित क्षेत्र मा राख्न। समय को निम्न दुई सत्र चार घण्टा बढ्छ। र मात्र पछि संकुचन सबै रात बाँकी गर्न सकिन्छ।
मह संग दूध, पिएको रात, एक उत्कृष्ट बेहोशि औषधि र छ हाइपनोटिक।
को सजग Avicenna मान्छे को समय देखि मह लाभदायक गुण र दूध। सुंदरता र युवा prolongation संरक्षण गर्न तिनीहरूले प्रयोग। आज यी व्यञ्जनहरु छैन कम सान्दर्भिक छन्। दूध र मह धेरै कस्मेटिक उत्पादनहरु को भाग हो।
को राम्रो थप: न्यानो पानी र दूध संग टब मा पोख्नुहोस्। यदि प्राकृतिक, तपाईं दूध पाउडर, पानी स्नान मा भंग गरिएको छ जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अलिकति एक गिलास फोमिंग सम्म पानी बलियो दबाब मह विकल्प खुसीले गदगद।
अब तपाईं एक कायाकल्प स्नान आनन्द उठाउन सक्छौं।
यहाँ तनाव सामना गर्न मदत गर्छ भनेर एक सूथिंग स्नान लागि अर्को नुस्खा छ।
दूध आधा लीटर र खुसीले गदगद उमालेर बनाउनु therein chamomile (3 चमचा) ले। यो तयार शोरबा जो तपाईं मह, समुद्र नुन र एक सानो बेकिंग सोडा को spoonfuls को एक जोडी थप्न सक्नुहुन्छ, पानी हालिएको छ पानी सफ्नर।
को स्नान मा सम्झना, गर्म पानी, राम्रो। यसलाई पछि छाला आश्चर्यजनक नरम र कोमल हुन्छ।
मह र डेयरी उत्पादन ठूलो र प्रभावकारी अनुहार मास्क, नरम र छाला चिकना पोषण कि बनाउन।
मह एक चम्मच, तर दुई चम्मच मिश्रण। राम्रो मिश्रण र कागति को रस केही थोपा थप्नुहोस्। बिस्तारै अनुहार लागू र तीस मिनेट आयोजित मास्क, त्यसपछि सहज तापमान पानी कुल्ला।
जो दूध र मह समावेश धन, को नियमित प्रयोग, तपाईंलाई स्वस्थ र सुन्दर रहन अनुमति दिन्छ।
नुन बिना आहार - तपाईलाई के चाहिन्छ?
रक्तचाप कम र रक्त नली बलियो कि खाद्य पदार्थ
होटल स्वर्ण खाडी स्टूडियो अपार्टमेंट3* (Crete, ग्रीस): फोटो र समीक्षा
हिज्जे "N" र "HH" विशेषण। विशेषण प्रत्यय। नियम, अपवाद
Mukasey अनातोली: जीवनी, परिवार, छोराछोरी
विद्यार्थी कसरी कमाउने? व्यावहारिक सुझावहरू